एप्पलको आइओएस १४.५ मा धेरै अपडेट हुने
एप्पलको अर्को नयाँ आइओएस १४.५ अबको केही दिनमा सार्वजनिक हुने भनिएको छ। गत हप्ता मात्रै कम्पनीले आइफोन र आइप्याडमा हुने ‘बग’को समस्या हटाउन आइओएस १४.४.२ ल्याएको थियो। यससँगै एप्पलका उपकरणमा थुप्रै ...
setopati.com . १ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नबिल बैंकले ल्यायो ‘नबिल जिन ए’ एकाउन्ट
काठमाडौँ– नबिल बैंकले ‘नबिल जिन ए’ एकाउन्ट ल्याएको छ । ‘नबिल जिन ए’ एकाउन्ट नयाँ सोच र नयाँ जोस बोकेका प्रबिधिमैत्री व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । यो योजनाले डिजिटल बैंकिङ्गमा नयाँ युगको...
khabarhub.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अनलाइनबाट जहाजको टिकेट काट्दा शतप्रतिशत क्यासब्याक पाउने अफर
काठमाडौं । फोनपेले नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहका लागि अफर ल्याएको छ । यसअन्तर्गत हवाई जहाजको टिकेट फोन पे आबद्ध मोबाइल बैंकिङ एपबाट खरिद गर्दा शतप्रतिशत क्यासब्याक पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्...
techpana.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सेलिब्रिटी नभन्दै गूगलमा भेट्न सकिन्छ आफ्नो नाम, जान्नुहोस्
काठमाडौं । यदि तपाई गूगलमा सर्च गरेर अरुले आफ्नो बारेमा थाहा पाउन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि तपाई सेलिब्रिटी हुन जरुरी छैन । गूगलले तपाईको पहिचान विश्वसामु ल्याउने प्रबन्ध मिलाइ दिएको छ । ह...
newspolar.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
विद्यालयलाई कम्प्युटर र प्रिन्टर वितरण
काठमाडौं । काभ्रे जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाले ६ विद्यालयलाई कम्प्युटर र प्रिन्टर वितरण गरेको छ । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन गाउँपालिकाले वडा नं. १ देखि ६ सम्मका एक/एक विद्यालयलाई कम्प्युटर, प्र...
techpana.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
धेरैले थाहा नपाएका एन्ड्रोइडका २५ सेक्रेट कोड
काठमाडौं । तपाईंले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा लुकेर बसेका विभिन्न फिचरबारे जानकारी लिनका लागि सिक्रेट कोड महत्वपूर्ण हुन्छन् । जसमार्फत तपाईंले आफ्नो मोबाइलको अवस्थाको समेत जानकारी राख्न स...
techpana.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नयाँ वर्षमा रिचार्जरले ७० प्रतिशतसम्मको छुटमा ग्याजेट्स उपलब्ध गराउने
इकमर्श प्लेटफर्म रिचार्जरले नयाँ वर्षको अवसरमा “न्यू इयर सेल” अफर सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइल एपका प्रयोगकर्तालाई केन्द्रमा राखेर रिचार्जरले ७० प्रतिशतसम्मको छुटमा विभिन्न किसिमका ग्याजेट्स उपलब्ध ...
lokaantar.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
दैनिकी सहज बनाउने मोबाइल एप्स
स्मार्टफोन अहिले हरेक व्यक्तिको आवश्यकता बनिसकेको छ । अफिसियल कामका लागि होस् वा फुर्सदको समय सदुपयोग, जुनसुकै अवस्थाका लागि स्मार्टफोन निकै सहयोगी र उपयोगी पनि छ । स्मार्टफोनको बजारमा एन्ड्रोइड र ...
nayapatrikadaily.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
विन्डोजमा ६४ बिटको वानड्राइभ आउँदै
माइक्रोसफ्टले विन्डोजका लागि ६४ बिटको वानड्राइभ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यसले ठूलो फाइलहरु ट्रान्सफर गर्न दिन्छ भने धेरै ओटा फाइल एकै पटक ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ । ३२ बिटभन्दा यसमा धेरै पूर्वाधा...
ictsamachar.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बिटक्वाइनले के साँच्चिकै वातावरण नष्ट गर्छ ?
काठमाडौं । गएको वर्ष बिटक्वाइनले निकै फाइदा लियो । कोरोना महामारीका कारण विश्व तटस्थ बनी करोडौं मानिसहरु घरभित्रै बन्दी बनिरहँदा क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य तीन वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै बनेकाे थियो । ए...
techpana.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
डार्क वेब हजारौं वेबसाइटहरुको कलेक्सन हो । यहाँ भएका सम्पूर्ण वेबसाइटहरुले आफ्नो आईपी एड्रेसलाई लुकाउन टोर र आई टु पी जस्ता एनाेनिमस (अज्ञात) टुलहरुको प्रयोग गर्दछन् । डार्क वेबलाई लागू औषध र चाइल...
techpana.com . १७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । दराजको स्वामित्वकर्ता कम्पनी अलिबाबामाथि चिनियाँ नियामकले १८ अर्ब २० करोड यूआन अर्थात् ३ खर्ब ३४ कराेड रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना लगाउने भएको छ । अलिबाबाले आफ्नो बजार वर्चश्व दुरुपयोग गरेक...
techpana.com . १८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
महाबिर पुनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम सुरु भएयता केन्द्रको काम र नामलाई लिएर धेरैले प्रश्न उठाउने र टिकाटिप्पणी गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय आविष्कार केन्द्रको नामलाई लिएर चर्चित...
techpana.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमको क्रियाशिल ट्रेड युनियन, नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन बागमती प्रादेशिक समितिले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संगठनको दोस्रो वाषिकाेत्सवका अवसरमा...
techpana.com . २२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
वातावरण संरक्षणमा स्थानीय ज्ञानको खोजी गर्दै यी युवक
‘हजुर दाइ… सबैको स्कोप राम्रो छ । बाबुसँग नै कुरा गरेपछि थप बुझ्न सकिन्छ, उसको इन्ट्रेस्ट के मा छ त्यसअनुसार नै हुन्छ दाइ । मलाई एकपटक बाबुलाई फोन गर्न भन्दिनुस् न है ।’ यति भनेर मोबाइल टेबलमा राख...
deshsanchar.com . २३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कोरोना महामारीको ‘नबिल जेन नेक्स्ट अकाउन्ट’ अन्तर्गत एक लाख खाता
काठमाडौँ : नबिल बैंकले कोभिड–१९ महामारीको समयमा सञ्चालनमा ल्याएको नयाँ जेनेरेशन जेन–नेक्स्ट खातामा नेपाल टेलिकम र एनसेलको २ जीबी डाटा प्याकेजको सुविधा घोषणा गरेको छ । यो योजनाले डिजिटल बैंकिङ्गमा न...
ekagaj.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडाैं । तपाईंको स्मार्टफोनको ब्याट्रीको आयु सधैं एकनाशको हुँदैन । समयअनुसार यसको क्षमता घट्दै जान्छ । यसकारण ब्याट्री टिकाइराख्न राम्राे विधि जान्नैपर्छ । यसका लागि चार्ज गर्ने उत्तम उपाय अपना...
techpana.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पनि जोडिएको छ । हाल ७५ जिल्लामा सरकारकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भएका विमितहरुको सेव...
NASA file image shows Apollo 11 U.S. astronaut Buzz Aldrin standing on the Moon, next to the Lunar Module (File Photo) WASHINGTON: The National Aeronautics and Space Administration (NASA) will lan...
english.khabarhub.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । अब स्पाइडर-म्यान मुभीलगायत सोनी पिक्चर्सले निर्माण गरेका सम्पूर्ण चर्चित शाेहरु नेटफ्लिक्समा प्रसारण हुने भएकाे छ । फिल्म हलमा रिलिज भइसकेपछि ती सम्पूर्ण फिल्महरु नेटफ्लिक्समा पनि प्रसार...
काठमाडौं । कम्प्युटर डिभाइसलाई माल्वेयरविरुद्द जोगाउन कुनै समय माइक्रोसफ्ट डिफेन्डरलाई एउटा कमजोर रक्षकको रुपमा लिइन्थ्यो । तर आजभोलि माइक्रोसफ्ट डिफेण्डरले आफूले आफूलाई बलियो र राम्रो बनाउँदै लगेक...
सामसुङले ल्यायो गज्जबको एप, जसले आइफोनलाई ग्यालेक्सी फोनमा परिवर्तन गरिदिन्छ
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुका लागि एप्पलको आइफोन र सामसुङको ग्यालेक्सी फोनमध्ये रोज्न लगाइयो भने अधिकांसले आइफोन नै रोज्लान् । आइफोन छाडेर ग्यालेक्सी फोन चलाउने मानिसहरु कमै होलान् । तर यहीँ यथार्थक...
onlinekhabar.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
फेसबुक, इन्स्टा र ह्वाट्सएपकाे सेवामा बारम्बार किन समस्या ?
काठमाडौं । बिहीबार राति फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपका सेवा एकैपटक डाउन भए । विश्वभरका हजारौं प्रयोगकर्ताहरुले यो समस्याको सामना गर्नुपरेको थियो । यससँगै एक महिनाभन्दा कम समयमा फेसबुकको सम्पूर...
न्युरोलिङ्कको ब्रेन चिप प्रत्यारोपण गरिएको बाँदरले गेम खेल्दै गरेको भिडिओ सार्वजनिक
काठमाडौं । मस्तिष्क इम्प्लान्ट गर्ने स्पेसएक्सको अर्को स्टार्टप न्युरोलिङ्कको नयाँ भिडिओ सार्वजनिक भएको छ । उक्त भिडिओ ‘पेजर’ नामको ९ वर्षको बाँदर आफ्नो मस्तिष्कले पोङ गेम खेलिरहेको देखिएको छ । ती...
techpana.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
डिशहोमका भाग्यशाली ग्राहकले पाए बैंकक घुम्न जाने मौका
काठमाडौं । डिशहोमले हालसालै नेपालीहरुको विभिन्न उत्सवहरुलाई मध्यनजर गर्दै “खुशीको उडान” योजना सुरु गरेको छ । यस योजनाको लक्ष्य हरेक सक्रिय ग्राहकहरुलाई हरेक बिहीबार खास उत्साह र खुशी प्रदान गर्नु ह...
डिसहोमको ‘खुशीको उडान’ योजना अन्तर्गत दुई जना विजेता घोषित
काठमाडौँ- डिसहोमले ‘खुशीको उडान’ योजना अन्तर्गत दुई जना भाग्यशाली विजेता घोषणा गरेको छ। २६ चैतमा गरिएको पहिलो लक्की ड्रमार्फत क्यास आइडी ०२५५८१३३९६० र ०२५१९२५०८८५ नम्वरका ग्राहकलाई विजेता घोषणा गर...
lokpath.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
चार्जमा राखेको मोबाइल पड्किँदा गम्भीर घाइते
भोजपुर । चार्जमा राखेको मोबाइल पड्किँदा एक महिला गम्भीर घाइते भएकी छन् । शुक्रबार भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१० बस्ने ५३ वर्षीय शर्मिला तामाङ चार्ज भइरहेको मोबाइल एक्कासी पड्किँदा घाइते भएकी हुन् ।...
काठमाडौं । सायद तपाईंमध्ये धेरैजना अझै पनि ५३ करोड ३० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको डेटा ब्रिच भएको समाचारहरु पढ्दै हुनुहुन्छ होला । तर भर्खरै अर्को पनि ठूलो डेटा ब्रिचको घटना हामीसामु आएको छ । जसमा ...
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले आउँदो वैशाखभित्रै इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी थालेकाे छ । कम्पनीले आक्रामक रुपमा बजारमा उपस्थिति जनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडाैंबाट एफट...
१ लाखले खोले ‘नविल जेन एन अकाउन्ट’, हरेक ग्राहकका लागि ३ लाख ७५ हजारको बीमा
काठमाडौं । नविल बैंकले गत वर्षदेखि नविल जेन एन अकाउन्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । नयाँ पुस्तालाई लक्षित गर्दै ल्याइएको याे योजनाले डिजिटल बैंकिङ्गमा नयाँ युगको सुरुवात गरेकाे बैंकले जनाएकाे छ । अनलाइनबा...
LinkedIn Data Breach: Personal Data of 500 Million Users Leaked Online
Just when we are recovering from the recent Facebook Data Leak, we have suffered from another major LinkedIn data breach. This time the personal information of halfabillion LinkedIn users was pos...
techsathi.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
स्मार्टफोन खरिद गर्न यी ७ कुरामा ध्यान दिनुहोस्
राम्रो स्मार्टफोन चयन गर्न पहिलेभन्दा अहिले निकै गाह्रो छ । बजारमा पाइने स्मार्टफोनमा एकसे एक फिचर र बिशेषता छन्, कुनै लुक्समा अब्बल कुनै फिचरमा । हामीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्मार्टफोन चयन गर्नुपर...
merolifestyle.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
यो रेडियो मंगल हो, सुन्नुहोस् मंगल ग्रहको मौसम सम्बन्धी जानकारी
अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाको पर्सभरेन्स (PERSEVERANCE ) रोभरले पहिलो पटक मंगल ग्रहको मौसम सम्बन्धी जानकारी दिएको छ । मंगल ग्रहको जेजेरोक्रेटरमा ओर्लिएको यस रोभरले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँको र...
ratopati.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नागरिक एपमा नयाँ अपडेट, अब मोबाइलबाटै पुलिस रिपोर्ट लिन सकिने
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट अब नागरिक एपमार्फत नै लिन पाउने भएका छन् । नागरिक एपमा नयाँ अपडेट आएसँगै यो सेवाको सुरुवात भएको छ । याे सेवा लिन सर...
अमेरिकाको रंगिन सपना
आफैसँग पढेका सबैजना विदेश जान थाले। मेरो मनमा पनि विदेश जाने हुटहुटी चल्यो। दुनियाँ गएको देख्दा आफू पछि परेजस्तो पनि लाग्यो। ममीलाई फोन गरेँ। 'ममी, म पनि विदेश जान्छु। यहाँ बसेर केही होला जस्तो छ...
setopati.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अनलाइनबाटै पठनपाठन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस
काठमाडौं । नेपालमा कोभिड १९ को दोस्रो लहरको खतरा देखिने संकेत भएसँगै सरकारले शैक्षिक संस्था तथा भिडभाड हुने क्षेत्रमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले हालै काेभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन ...
Keeway Bikes Price in Nepal: Features and Specs
Keeway Motorcycles recently got its launch in Nepal. KTM International Trading Pvt. Ltd.,aparent company of Benelli motorcycles, has launched the two Keeway models in Nepal. With the introducti...
techlekh.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
टिकटकमा अटो क्याप्सन फिचर आउँदै
टिकटकमा अब अटोमेटिक क्याप्सनको फिचर थप हुने भएको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई अझै सहज बनाउने छ । अहिले सम्म टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले भिडियोमा आफै क्याप्सन हाल्ने गर्थे जसलाई धेरै समय लाग्थ्यो तर अब यो का...
ictsamachar.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
Source: Hamro Patro